iminyaka 2 2 izinyanga ezedlule #104 by Gh0stRider203
Ngiye wabheka nxazonke engizikhiphe KODWA ukuthola iphaneli ehloniphekile freeware noma abanikeze asebenza nabo virtual Angikwazi wafaka 748F ukuthi mina fly (i uzoba simbe isixhumanisi kamuva lol).
umuntu enginakho isebenzisa okuzenzakalelayo 747 panel okuyinto hey yini, ukuthi isebenza ... kodwa ngingathanda empeleni uthanda ukuthola VC ehloniphekile. SAMUKELEKILE, mina ngokuvamile fly kwephaneli 2d kodwa eh VC limnandi manje bese uma got a kwelanga enhle noma kwelanga phambi kwakho
iminyaka 2 2 izinyanga ezedlule #112 by aputech
Gh0st, abheke cockpits Ken Wigginton sika. Ngaba nenkinga efanayo, Engafuni kangcono 2D / VC abanikeze asebenza nabo, futhi uye wenza labo eziningana ezinhle kakhulu, yonke into-Boeing futhi Airbus ngokufanayo.
iminyaka 2 2 izinyanga ezedlule #116 by Gh0stRider203
Ngizokuhlolela ukuthi .... ngiyabonga.
Isikhathi ukudala page: 0.336 imizuzwana